ဆီးချိုရောဂါသမားတို့အတွက် သတင်းကောင်း ခရေရှိလျှင် ဆီးချိုမကြောက်ရဘူး... - Barnyar Barnyar
ဆီးချိုရောဂါသမားတို့အတွက် သတင်းကောင်း ခရေရှိလျှင် ဆီးချိုမကြောက်ရဘူး…
April 21, 2022 linn htet Health 0
ဦးဇင်း ရဟန်းအစ်မတစ်ယောက်က အသံတိတ် လူသတ်ရောဂါလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဆီးချိုရောဂါ ရှိပါတယ် ။ ငွေကြေးလည်း ပြည့်စုံတော့ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ သောက်နေရပါတယ် ။ တစ်ခါဝယ်ရင် သောင်းဂဏန်း သိန်းဂဏန်းထိ ကုန်ကျပါတယ် ။
အသက်ကို ငွေနဲ့ဝယ်ထားရတယ် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး ။ ဒီဝေဒနာကို ခံစားနေရတာ ဦးဇင်းကို သိက္ခာမထပ်ခင်က ဆိုပါတော့ အခုဆို ၆ နှစ်မကတော့ပါဘူး ။
ဦးဇင်းလည်း ဒီဝေဒနာခံစားနေရတာ မကြည့်ရက် လို့ ငွေကြေးလည်း သက်သာ ဆိုးကျိုးလည်း မဖြစ်မယ့် ဆေးနည်းတွေ ရှာပေးပါတယ် ။
ရုံးပတေသီး ရေစိမ်သောက်နည်း ၊ သင်္ဘောသီးအစိမ်းကို ရေနွေးဖြင့် သောက်နည်းတွေကို လမ်းညွန်ပေးပါတယ် ။ သင်္ဘောသီးကို ရေနွေးစိမ် သောက်တာ တစ်ပတ် နှစ်ပတ်လောက် ကြာပါတယ် ။ မသက်သာပါဘူး ။
ဆီးချို တစ်ခါတက်ရင် ၅၀၀ထိ တက်ပါတယ် ။ ဒီလောက် ဆီးချိုတက်ရင် ခေါင်းမထူ နိုင်တော့ပါဘူး။ သာမန် လူတစ်ယောက် ဆိုရင် လေဖြတ်ရုံ တင်မက အသက်ပါသွားနိုင်တဲ့ အခြေနေပါပဲ ။
သူကတော့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ များနေလို့လား …. ဒါမှမဟုတ် ဒီရောဂါကို ခံနိုင်ရှိသွားလို့လား ….. မပြောတတ်ပါဘူး ။ အင်္ဂလိပ် ဆရာဝန် နှင့် ပြလိုက်လျှင် သက်သာ သွားပါတယ်… ၃၀၀ထိ ပြန်ကျသွား ပါတယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ , ၁၂ ပိုင်းက ရဟန်းအစ်မ နှင့်အတူ ပဲခူး ကျောက်တန်း မဟာဗောဓိတောရကျောင်း ဆယ်ရက်တရားစခန်းပွဲမှာ တစ်ညအိပ် အချိုပွဲ သွားလှူကြပါတယ် ။
တောရကျောင်းမှာ ဦးဇင်းကို ပထမဦးဆုံး ရဟန်းခံပေးတဲ့ ရဟန်းအစ်မနဲ့ တွေလို့ ရဟန်းအစ်မနှစ်ယောက် စကားကောင်း နေကြပါတယ် ။ စကားပြောရင်း စပ်မိလို့ ဆီးချိုရောဂါဘက် ရောက်သွားပါတယ် ။
ပဲခူးက ရဟန်းအစ်မက သူဆီမှာ ဆီးချိုရောဂါရှိနေကြောင့် အချိုမှန်သမျှ ဘာမှ မစားရကြောင့် စားချင်သော်လည်း မစားရတာ ရှေးဘဝက သူများစားတာကို မနာလိုခဲ့လို့ ဖြစ်မည်ထင်ကြောင်း ဆီးချိုတစ်ခါ တက်ရင် အနည်းဆုံး ၃၅၀ထိ ရှိကြောင့် အသက်ကို ငွေနဲ့ဝယ်ထားရကြောင့်း စသည်ဖြင့် ပြောပြပါတယ် ။
ကျောက်တန်းက ရဟန်းအစ်မလည်း သူ့ရဲအဖြစ်ပျက် လက်တွေ့တစ်ခုကို ပြောပြပါတယ် ။
သူပြောပြပုံက သူမောင်လေး ဂျပန်မှာ နေစဉ် ဦးဏှောက်ပိုးဝင်ကြောင့် ခွဲစိတ်ဖို့ဆရာဝန်အား ပြကြည့်ရာ ဆီးချိုရှိနေသဖြင့် ခွဲမရဖြစ်နေကြောင့် ဂျပန်ဆရာဝန်က ခရေရွက်ကို သုံးခွက်တစ်ခွက် ကျိုသောက်ရန် တပတ်ပြည့်လျှင် ပြန်လာရန် မှာလိုက်ပါတယ် ။
သူ့မောင်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခရေပင် လိုက်ရှာကာ ဆရာဝန်မှာထားသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်လိုက်ရာ အံ့သြဖွယ်ရာ ဆီးချိုရောဂါ မရှိတော့သဖြင့် ဦးဏှောက်ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်သွားကြောင်း ပြောပြပါသည် ။
ပဲခူးက ရဟန်းအစ်မလည်း ခရေရွက်ကို သုံးခွက်တစ်ခွက် ကျိုသောက်လိုက်ရာ အခုဆိုရင် အတော်သက်သာသွားသည် ။ ဆီးချိုပြန်တိုင်းလိုက်ရင် ၁၅၀ ထိပဲ ကျန်တော့သည် ။
ပိုက်ဆံ အကုန်လည်းသက်သာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမဖြစ် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သနည်း ။ ခရေပင်က မြို့တိုင်း ရွာတိုင်း အပိုင်းတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ လိုက်ရှာစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ဆီးချိုရောပျောက်တယ်လို့တော့ လူတိုင်းသိမယ် မထင်ပါဘူး။ ဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာလည်း တန်စီပြီး စိုက်ထားပါတယ် အရိပ်ရအောင်ရယ် ပန်းမွှေးတာကြောင့်ရယ် ဆိုပြီး စိုက်ထားတာပါ ဦးဇင်းလည်း ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့မှဘဲ သိတော့တယ်ဗျာ ။
တန်ဖိုးမရှိပေါများတယ် ဆိုရင် လူတွေက အထင်မကြီးတာ မဆန်းပါဘူး ။ ဈေးကြီးပြီး တန်ဖိုးမရှိတာကို အထင်ကြီးတတ်တာလည်းမဆန်းပါဘူး ။ အထင်မကြီးလို့ မလိုက်နာလည်း မလိုက်နာသူရဲ့ တာဝန်ပါပဲနော် ။
ဆေးသမားတော်ကြီး ဆရာဇီဝက.က သူ့ဆရာရဲ့အမေးကို ပြန်ဖြေသလိုပဲ သစ်ပင်တိုင်းက ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ် ။ သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွားပေါ့နော် ….. ။ ။
ကဲမိတ်ဆွေတို့လည်း သိသွားပြီ ပြန်လည်းမျှဝေ လိုက်ကြအုံးနော် ကုသိုလ်ရပါတယ် ။
ဆီးခြိုရောဂါသမားတို့အတှကျ သတငျးကောငျး ခရရှေိလြှငျ ဆီးခြိုမကွောကျရဘူး…
ဦးဇငျး ရဟနျးအဈမတဈယောကျက အသံတိတျ လူသတျရောဂါလို့ နာမညျကွီးတဲ့ ဆီးခြိုရောဂါ ရှိပါတယျ ။ ငှကွေေးလညျး ပွညျ့စုံတော့ အင်ျဂလိပျဆေးတှေ သောကျနရေပါတယျ ။ တဈခါဝယျရငျ သောငျးဂဏနျး သိနျးဂဏနျးထိ ကုနျကပြါတယျ ။
အသကျကို ငှနေဲ့ဝယျထားရတယျ ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး ။ ဒီဝဒေနာကို ခံစားနရေတာ ဦးဇငျးကို သိက်ခာမထပျခငျက ဆိုပါတော့ အခုဆို ၆ နှဈမကတော့ပါဘူး ။
ဦးဇငျးလညျး ဒီဝဒေနာခံစားနရေတာ မကွညျ့ရကျ လို့ ငှကွေေးလညျး သကျသာ ဆိုးကြိုးလညျး မဖွဈမယျ့ ဆေးနညျးတှေ ရှာပေးပါတယျ ။
ရုံးပတသေီး ရစေိမျသောကျနညျး ၊ သင်ျဘောသီးအစိမျးကို ရနှေေးဖွငျ့ သောကျနညျးတှကေို လမျးညှနျပေးပါတယျ ။ သင်ျဘောသီးကို ရနှေေးစိမျ သောကျတာ တဈပတျ နှဈပတျလောကျ ကွာပါတယျ ။ မသကျသာပါဘူး ။
ဆီးခြို တဈခါတကျရငျ ၅၀၀ထိ တကျပါတယျ ။ ဒီလောကျ ဆီးခြိုတကျရငျ ခေါငျးမထူ နိုငျတော့ပါဘူး။ သာမနျ လူတဈယောကျ ဆိုရငျ လဖွေတျရုံ တငျမက အသကျပါသှားနိုငျတဲ့ အခွနေပေါပဲ ။
သူကတော့ ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ မြားနလေို့လား …. ဒါမှမဟုတျ ဒီရောဂါကို ခံနိုငျရှိသှားလို့လား ….. မပွောတတျပါဘူး ။ အင်ျဂလိပျ ဆရာဝနျ နှငျ့ ပွလိုကျလြှငျ သကျသာ သှားပါတယျ… ၃၀၀ထိ ပွနျကသြှား ပါတယျ ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ , ၁၂ ပိုငျးက ရဟနျးအဈမ နှငျ့အတူ ပဲခူး ကြောကျတနျး မဟာဗောဓိတောရကြောငျး ဆယျရကျတရားစခနျးပှဲမှာ တဈညအိပျ အခြိုပှဲ သှားလှူကွပါတယျ ။
တောရကြောငျးမှာ ဦးဇငျးကို ပထမဦးဆုံး ရဟနျးခံပေးတဲ့ ရဟနျးအဈမနဲ့ တှလေို့ ရဟနျးအဈမနှဈယောကျ စကားကောငျး နကွေပါတယျ ။ စကားပွောရငျး စပျမိလို့ ဆီးခြိုရောဂါဘကျ ရောကျသှားပါတယျ ။
ပဲခူးက ရဟနျးအဈမက သူဆီမှာ ဆီးခြိုရောဂါရှိနကွေောငျ့ အခြိုမှနျသမြှ ဘာမှ မစားရကွောငျ့ စားခငျြသျောလညျး မစားရတာ ရှေးဘဝက သူမြားစားတာကို မနာလိုခဲ့လို့ ဖွဈမညျထငျကွောငျး ဆီးခြိုတဈခါ တကျရငျ အနညျးဆုံး ၃၅၀ထိ ရှိကွောငျ့ အသကျကို ငှနေဲ့ဝယျထားရကွောငျ့း စသညျဖွငျ့ ပွောပွပါတယျ ။
ကြောကျတနျးက ရဟနျးအဈမလညျး သူ့ရဲအဖွဈပကျြ လကျတှတေ့ဈခုကို ပွောပွပါတယျ ။
သူပွောပွပုံက သူမောငျလေး ဂပြနျမှာ နစေဉျ ဦးဏှောကျပိုးဝငျကွောငျ့ ခှဲစိတျဖို့ဆရာဝနျအား ပွကွညျ့ရာ ဆီးခြိုရှိနသေဖွငျ့ ခှဲမရဖွဈနကွေောငျ့ ဂပြနျဆရာဝနျက ခရရှေကျကို သုံးခှကျတဈခှကျ ကြိုသောကျရနျ တပတျပွညျ့လြှငျ ပွနျလာရနျ မှာလိုကျပါတယျ ။
သူ့မောငျလညျး ဂပြနျနိုငျငံမှာ ခရပေငျ လိုကျရှာကာ ဆရာဝနျမှာထားသညျ့အတိုငျး ပွုလုပျလိုကျရာ အံ့သွဖှယျရာ ဆီးခြိုရောဂါ မရှိတော့သဖွငျ့ ဦးဏှောကျခှဲစိတျမှု အောငျမွငျသှားကွောငျး ပွောပွပါသညျ ။
ပဲခူးက ရဟနျးအဈမလညျး ခရရှေကျကို သုံးခှကျတဈခှကျ ကြိုသောကျလိုကျရာ အခုဆိုရငျ အတျောသကျသာသှားသညျ ။ ဆီးခြိုပွနျတိုငျးလိုကျရငျ ၁၅၀ ထိပဲ ကနျြတော့သညျ ။
ပိုကျဆံ အကုနျလညျးသကျသာ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးလညျးမဖွဈ ဘယျလောကျကောငျးလိုကျသနညျး ။ ခရပေငျက မွို့တိုငျး ရှာတိုငျး အပိုငျးတိုငျးမှာ ရှိပါတယျ။ လိုကျရှာစရာ လိုမယျမထငျပါဘူး ။
ဒါပမေယျ့ ဆီးခြိုရောပြောကျတယျလို့တော့ လူတိုငျးသိမယျ မထငျပါဘူး။ ဦးဇငျးတို့ကြောငျးမှာလညျး တနျစီပွီး စိုကျထားပါတယျ အရိပျရအောငျရယျ ပနျးမှေးတာကွောငျ့ရယျ ဆိုပွီး စိုကျထားတာပါ ဦးဇငျးလညျး ဆေးဖကျဝငျတယျဆိုတာကို လကျတှမှေ့ဘဲ သိတော့တယျဗြာ ။
တနျဖိုးမရှိပေါမြားတယျ ဆိုရငျ လူတှကေ အထငျမကွီးတာ မဆနျးပါဘူး ။ ဈေးကွီးပွီး တနျဖိုးမရှိတာကို အထငျကွီးတတျတာလညျးမဆနျးပါဘူး ။ အထငျမကွီးလို့ မလိုကျနာလညျး မလိုကျနာသူရဲ့ တာဝနျပါပဲနျော ။
ဆေးသမားတျောကွီး ဆရာဇီဝက.က သူ့ဆရာရဲ့အမေးကို ပွနျဖွသေလိုပဲ သဈပငျတိုငျးက ဆေးဖကျဝငျပါတယျ ။ သိသူဖျောစား မသိသူကြျောသှားပေါ့နျော ….. ။ ။
ကဲမိတျဆှတေို့လညျး သိသှားပွီ ပွနျလညျးမြှဝေ လိုကျကွအုံးနျော ကုသိုလျရပါတယျ ။
အကောင်းဆုံးသော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လျှင် “မိမိတန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပါ”
(၃) ရက်သား ယောက်ျားလေး ရင်ချင်းဆက် အမွှာလေးတွေ ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် တာဝန်ယူပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
This Month : 5529
This Year : 58229
Total Visit : 58229
Hits Today : 2261
Total Hits : 333141